तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनलाई ह्याकरबाट बचाउन चाहनुहुन्छ ? कम्तिमा यी काम गर्नुहोस् - Technology Khabar
» तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनलाई ह्याकरबाट बचाउन चाहनुहुन्छ ? कम्तिमा यी काम गर्नुहोस्
कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेसँगै मानिसहरुका लागि स्मार्टफोन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण भएको छ। व्यक्तिले यो डिभाइस कार्यालयको काम गर्नका साथै आफ्ना साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा रहन प्रयोग गर्दछ।
यसैबीच, ह्याकरहरूले पनि यसलाई मानिसहरुको जानकारी चोर्न र उनीहरूलाई ठग्ने अवसरको फाइदा लिईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले प्रश्न उठ्छ कि कसरी तपाईँको स्मार्टफोनलाई ह्याकरबाट जोगाउने।
त्यसोभए तपाईंलाई हामी यसको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौं । आज हामी तपाईंलाई यहाँ केहि विशेष विधिहरूको बारेमा कुरा गर्ने छौं, जसमार्फत तपाईं आफ्नो मोबाइल डाटा सुरक्षित राख्न सक्षम हुनुहुनेछ।
आउनुहोस् ती उपायहरुको बारेमा जान्नुहोस्-
पासवर्ड एपको प्रयोग
जो कसैलाई पनि जटिल पासवर्डहरू सिर्जना गर्न प्राय अलि गाह्रो हुन्छ, तर तपाईं पासवर्ड एपमार्फत ससक्त पासवर्ड सजिलै सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यस बाहेक, पासवर्ड एपले तपाईँद्धारा सिर्जना गरिएको पासवर्ड पूर्ण सुरक्षित राख्दछ। पासवर्ड सिर्जना गर्ने र सुरक्षित बनाउने यी एप्स गूगल प्ले स्टोर र अनुप्रयोग स्टोर प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध छन्।
मेसेजिङ्ग एप प्रयोग
यद्यपि व्यक्तिले एसएमएसका लागि फोनमा अवस्थित मेसेजिंग प्लेटफर्म प्रयोग गर्दछन्, तर त्यसो गर्नु हुँदैन, किनकि यसले व्यक्तिगत डाटालाई जोखिममा राख्छ। यद्यपि मेसेजिंग एप यो समस्याबाट बच्नका लागि प्रयोग गर्नसकिन्छ। यी एपहरूले प्रयोगकर्ताको च्याट, फोटो र भिडियो पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिन्छ। यस बाहेक, प्रयोगकर्ताहरूले यी एपहरूमा त्यस्ता सुविधाहरू प्राप्त गर्दछन्, जुन साधारण मेसेजिङ्ग प्लेटफर्ममा उपलब्ध छैनन्।
समय समयमा स्मार्टफोन अपडेट
स्मार्टफोनलाई समय समयमा अपडेट गर्नुपर्दछ, किनकि यसले ह्याकर्सलाई प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी ह्याक गर्ने अवसर दिँदैन। यस बाहेक, प्रयोगकर्ताहरूले अपडेटमा एन्ड्रोइड र आईओएस सुरक्षा प्याचको साथ धेरै सुरक्षा फिचरहरू प्राप्त गर्दछ।
तेस्रो पक्षिय स्टोरबाट एप डाउनलोड
बिर्सेर पनि कुनै तेस्रो पक्षिय अर्थात थर्ड पार्टी एप स्टोरबाट एप डाउनलोड नगर्नुस्। धेरै चोटि एप डाउनलोड गर्ने लिंक पनि मेसेजहरुमा आउँछन्, तर तिनीहरूबाट टाढा नै रहनुहोस्। यदि तपाईं एप डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ भने, गूगल प्ले स्टोर वा एप्पलको एप स्टोर तथा अन्य आधिकारीक एप स्टोरहरुबाट मात्रबाट गर्नुहोस्।
उल्लेखित विषयहरुमा ध्यान दिँदा ह्याकरले तपाईँको फोनमा पहुँच प्राप्त गर्न निकै कठिन हुनेछ तर यस बाहेक अन्य विषयहरुमा पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।